Location: Mbido » Ịdee » Obodo | Mpaghara » Jamaica » Jamaica ga-eso Spain bịanye aka na MOU ọhụrụ na mmepe njem nlegharị anya
Mịnịsta na-ahụ maka njem nlegharị anya, Hon. Edmund Bartlett (n'aka ekpe) na-akparịta ụka ya na Mịnịsta na-ahụ maka mmepụta ihe, ahia, na njem nlegharị anya nke Spain, Hon. Reyes Maroto, na FITUR, ihe ngosi njem nlegharị anya na njem nlegharị anya nke mba ụwa kwa afọ, na-aga n'ihu na Madrid, Spain. Nzukọ a mere ka e nwee nkwekọrịta ịmepụta akwụkwọ nkwekọrịta maka imekọ ihe ọnụ n'akụkụ dị iche iche nke mmepe njem nlegharị anya. - Foto sitere n'ikike nke Jamaica Ministry of Tourism
Minista njem nlegharị anya Jamaica, Hon. Edmund Bartlett, ekwuputala na Jamaica na Spain ga-emepụta akwụkwọ nkwekọrịta iji kwadoo n'akụkụ dị iche iche nke mmepe njem nlegharị anya na mgbanwe akụ na ụba.
Nkwupụta a na-esochi nzukọ ya na Mịnịsta na-ahụ maka ụlọ ọrụ, azụmaahịa na njem nlegharị anya Spain, Hon. Reyes Maroto, n'isi taa na FITUR, ihe ngosi njem njem na njem nlegharị anya nke ụwa kwa afọ, na-aga n'ihu na Madrid, Spain. Na mgbakwunye na Dominican Republic, nke bụ mba mmekọ FITUR nke afọ a, FITUR na-achịkọta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu narị mba nwere nnọchi anya gọọmentị iri asaa.
"Obi dị m ụtọ ịkpọsa nke ahụ Jamaica na Spen ga-emepụta akwụkwọ nkwekọrịta maka imekọ ihe ọnụ na mpaghara dị iche iche nke mmepe njem nlegharị anya. Mụ na Minista Morato taa nwere mkparịta ụka sara mbara gbasara akụkụ dị iche iche nke mgbake na ntughari njem nlegharị anya dị ka onye na-ebuga mmụba na mgbanwe akụ na ụba," Bartlett kwuru.
"Anyị tụlere ọrụ nke United Nations World Tourism Organisation dị ka ụlọ ọrụ dị oke mkpa maka ịchekwa agụmakwụkwọ na ngwa bara uru dị mkpa iji wulite njem nlegharị anya ọhụrụ nke ga-eme ka obere mba na ndị egwuregwu obere na ndị na-eme egwuregwu nwee ahụmịhe ziri ezi na iji nwetaghachi. ọtụtụ n'ime ego furu efu," ka o kwukwara.
Jamaica bụ onye ndu echiche.
Bartlett jikwa ohere ahụ kpọọ Mịnịsta Morato ka ọ bịa na Jamaica nke mbụ Global Tourism Resilience Day, nke akwadoro na February 17th, 2022, na World Expo na Dubai. Ụbọchị a ga-elekwasị anya n'ikike nke mba iji wulite ikike ịzaghachi ihe egwu mba ụwa na nke zuru ụwa ọnụ ma nwee ike buru amụma nke ọma nzaghachi ha. Ọ ga-enyekwara mba dị iche iche aka ịghọta na ibelata mmetụta ihe egwu ndị a na mmepe ha, mana nke kachasị mkpa, ọ ga-enyere ha aka ijikwa ma gbakee ngwa ngwa mgbe ihe egwu ndị a gasịrị.
"Jamaica bụ n'ezie onye ndu echiche na mpaghara a, ma anyị kpebisiri ike na anyị na ndị mmekọ anyị niile na-arụkọ ọrụ iji wulite ụwa siri ike, dị irè na nke na-agbanwe agbanwe nke nwere ike ịzaghachi nke ọma na ihe egwu ga-abịa ka anyị na-aga n'ihu na njem nke ndụ a. Bartlett kwuru.
Ọzọ na: Jamaica | World Tourism Organisation | United Nations | Spain | Spa | Nkwụghachi | Organization | Tourism
Abu Dhabi 31st International Book Fair na-ekpughere ebumnuche na-atọ ụtọ Tourism|
Oge anọ nkwari akụ Westlake Village: Ahụmahụ ịdị mma nke Southern California Spa|
Jamaica Organization Nkwụghachi Spa Spain Tourism United Nations World Tourism Organisation
Ọtụtụ ụgbọ elu ozugbo n'etiti US na China kwụsịrị
Rocky Point Beach ka ọ ga-amalite St. Thomas Tourism...
New Ambassadors nke Tourism na Italy
2022 ProWein na Dusseldorf. Ọcha mmanya si China
Jamaica na France na-ekwu maka imekọ ihe ọnụ na njem nlegharị anya
Onye minista na-ahụ maka njem nlegharị anya Seychelles na ndị isi obodo…
FDA kwadoro ọgwụgwọ ọhụrụ maka ihu...
Ọchịchọ zuru ụwa ọnụ maka IMEX Frankfurt bụ akara dị mma
A na-atụ anya ahịa ahịa kemịkalụ dị n'elu…
IATA: Mgbake siri ike na Jenụwarị metụtara…